Nagu Saabsan - Zhongshan City Jiawang Iron Products Products Co., Ltd.
Zhongshan City Jiawang Iron Products Products Co., Ltd. waa
ku takhasusay qaabeynta iyo soo saarista weelashasaxanka jikada ee steel steel, oo ku yaal Dongfeng Town, Magaalada Zhongshan, Gobolka Guangdong.
Waxaan leenahay warshad caaryada noo gaar ah si aan ula jaanqaadno ganacsiga sii kordhaya oo aan u daboosho baahiyaha moodellada cusub. Waqtigan xaadirka ah, in ka badan 100 moodal oo kala duwan ayaa lagu haystaa warshaddeena, welina waxaan soo saareynaa in ka badan 20 moodel oo cusub sannad kasta.
Kaliya ma siin karno saxanka jikada, laakiin waxaan sidoo kale helnaa fikradaha macaamiisheenna. Xiriir ganacsi oo waqti-dheer iyo guul guuleysasho ayaa si weyn looga raadsadaa shirkaddayada .hoose Jiawang, selectyourde horumarineed.
Aragtidayadu: Si Loo Abuuro Wax Soo Saar Qiima Leh
sii wad inay dhagaystaan ​​oo ay kaafiyaan baahiyaha isticmaaleyaasha, hagitaan iyo dhaafiyaan baahiyaha adeegsadaha, iyo inaad ku guuleysatoe redaawadayaasha isticmaala;
Adoo kor u qaadaya heerka shirkadaha iyo sumadda astaanta, si shaqaaluhu u leeyihiin dareen sare sharaf iyo sharaf, ku kasbasho shaqaalaha ixtiraamka leh.
Dhiirrigelinta horumarka caafimaad ee wershadaha internetka, la-hawlgalayaasha si loo kobciyo loona guuleysto warshadaha ixtiraam;
Diiradda saar mas'uuliyadda shirkadda, daryeelka bulshada, dib u siinta bulshada, guuleysiga ixtiraamka bulshada.
Qiimayaasha Shirkadda: Xirfad-xirfadeed, u-go'an, daacadnimo, iyo Win -win
No Hal-abuurnimo loogu talagalay in qiimo loogu abuuro macaamiisha;
Qof kasta wuu abuuri karaa, wax walbaa hal abuur bay yeelan karaan;
Ku dhiirrasho inaad isku daydo, ha ka baqin guuldarrada, ku wanaagsan soo koobid
Falsafada Ganacsiga: Qiimaha Dhamaan Isticmaalayaasha
Diirada saar horumarka muddada-dheer ee dano ganacsi awgood waxay dhaawaceysaa qiimaha isticmaalaha, Dareenka iyo faham qoto dheer ee baahida macaamiisha, iyo si joogto ah u fiicnaanta wax soo saarka iyo adeegyo lagu daboolayo baahiyaha isticmaalaha;
Muhiimadda ay u leedahay wada-xiriirka qiirada leh ee adeegsadayaasha, xushmeynta waayo-aragnimada adeegsadaha, koritaanka leh isticmaalayaasha.
Himiladeenna: In aan siino Macaamiisha qubno wax-ku-ool ah oo qiimo leh, Ku darista Qiimaha Alaabooyinkayada oo aan kor ugu qaadno Adeegga
Waxay ka dhigtaa alaabada iyo adeegyada raaxo iyo raaxo dadka;
Waxaa diiradda lagu saaray gobollada kala duwan, kooxo kala duwan, walxo kala duwan waxayna bixiyaan adeegyo iyo adeegyo kala duwan;
Abuur madal furan oo guuleysata, lashaqee lamayaasha si loo abuuro jawi internet caafimaad qaba.